CNN: Deeqaha Soomaaliya la siiyo oo noqday ilaha dhaqaale ee Al-Shabaab – Kasmo Newspaper
CNN: Deeqaha Soomaaliya la siiyo oo noqday ilaha dhaqaale ee Al-Shabaab
Updated - February 13, 2018 3:34 pm GMT
London (Kasmo), Ururka Al-Shabaab ee gacansaarka la leh Al-Qacida ayaa la sheegay in sannad kasta ka soo gasho kumannaan Dollar lacagaha deeqaha ah ee reer Gaalbeedku ugu talagaaleen la dagaallanka argagixisada Soomaaliya.
Sidaasna waxaa lagu sheegay baaritaan idaacadda CNN ka samaysay Gobolka Bay isla markaasna baahisay Isniintii 12kii Febraayo, taas oo lagu soo bandhigay in lacagaha Qarammada Midoobay siiso barakacayaasha ku dambeeyaan gacanta argagixisada.
Xubno horey uga tirsanaa Al-Shabaab iyo qaar Sirdoonka Xukuumadda ah ayaa sheegaya in Kooxdu maalin kasta kumannaan Dollar uga qaadato dadka baraha jidgooyada. Iyo in ay canshuuro ka qaaddo ganacsiga, mararka qaarkoodna la wareegto raashinka gargaarka ah ee ku socda dadka ku barakacay gudaha dalka.
Dadka ka soo caararay guryahooda waxay ku jiraan xeryo qaxooti oo Qarammada Midoobay mas’uul ka tahay kuna yaalla Baydhaba, halkaas oo qofkiiba la siiyo Kaar Bangi oo bil walba loogu shubo $80-90 Dollar, si uu ugu iibsado waxyaabaha daruuruga ah.
Hannaankaas lacagaha tooska ah waxaa loogu talagalay si looga hortago dhibta ka taagan maamulka kolonyada raashinka ah ee sida joogtada ah loogu gaysto weerarka iyo dhaca.
Xubno horey uga tirsanaa Al-Shabaab iyo Sirdoonka Dawladduba waxay sheegeen in 2 jidgooyo oo waddada Baydhaba oo qur ah ka soo gasho argagixisada $ 5,000 oo Dollar maalintiiba. Arrintaas waxaa xaqiiyay mid ka mid ah Sakawaadka Al-Shabaab oo ururin jiray Sakada, kaas oo sheegay in canshuurta waddooyinku tahay ilaha dhaqaale ee ugu muhimsan maaliyadda argagixisada.
Waxaa si gaar ah loo xusayaa waddada Baydhaba tagta iyo midda Muqdisho ku xirta Gobolka Shabeelle in ay yihiin meelaha faa’dooyinka ugu badan laga helo, ciddii bixin weydana la qabto ama la dilo.
Ergayga Q.M. ee Soomaaliya, Michael Keating ayaa dhiniciisa xaqiijinaya dhacdada, wuxuuse caddeeyay in gargaarka badankiisu gaaro dadkii loogu talagay, isaga oo ku daray: ‘Nasiibdarro dadka gargaarka ka hela Ururrada aadamiga waxaa bartilmaameed ka dhigta mintidiinta lacago-doonka ah, laakiin waa khalad in la yiraahdo jawaab ku habboon lagama bixiyo, si looga hortago dhibtaas’.